Ciyaaraha Console oo loogu talagalay taleefannada Android | Androidsis
Eder Ferreño | | Ciyaaraha Android, Noticias
Waxaan haynaa xulasho ballaaran oo ciyaaro ah oo laga heli karo Android. Qaar badan oo ka mid ah ciyaarahan ayaa loo sii daayay maalintooda kombiyuutarrada fiidiyowga ah iyo waqtiga ka dib waxaa sidoo kale loo habeeyay aaladaha moobaylka. Waxaan kaala hadli doonaa kulamadan hoos ku xusan. Tan iyo markasta waxaa jira ciyaaro badan oo nuucaan ah oo ku yaal Play Store. Sidaa darteed, waxaan sameynay xul.
Waxaan hoos idiinka tagi doonaa qaar ciyaaro la sii daayay maalintoodii konsollooska oo hadda loo habeeyay Android. Runtii inbadan oo idinka mid ah ayaa ciyaaray ciyaarahan. Diyaar ma u tahay inaad hubiso xulashada cinwaannada?
Ciyaarahan badankood waxaa loo sii daayay qunsuliyadaha waaweyn ee suuqa, laakiin sidoo kale PC. Marka waa macquul inaad xitaa iyaga ku haysato guriga. Hadda, dhammaantood waxaa loo habeeyay qalabka moobiilka, Android kiiskan. Kuwani waa cinwaannada aan ku soo darnay liiska:
1 Kubadda Cagta FIFA
2 Baahida Xawaaraha: Inta badan Loo Baahan yahay
3 Grand Tuug Automobile: San Andreas
Kubadda Cagta FIFA
Mid ka mid ah kulamada ugu halyeeyga badan ee lagu qaboojiyo iyo loolanka weyn ee PES. Malaayiin isticmaaleyaal ah oo adduunka ku nool ayaa ku riyaaqay qoraallada badan ee FIFA. Hadda, isticmaalayaashu waxay awood u leeyihiin inay ku raaxaystaan ​​ciyaarta taleefankooda. Waxa ugu fiican ayaa ah in ciyaarta la waafajiyay laakiin aan lumin inta badan astaamaheeda. Waxaan abuuri karnaa shaashaddeena iyo waxaan wajaheynaa kooxaha ugu fiican adduunka markasta. Marka waa inaan la soo baxnaa xirfadaheena ugu fiican si aan kulamada ugu guuleysano. Sawir gacmeedyo iyo kontaroolo wanaagsan oo loogu talagalay isticmaalka mobilka.
Ku soo degsashada ciyaartan Android waa bilaash. In kasta oo aan wax ku iibsanno gudaheeda.
Baahida Xawaaraha: Inta badan Loo Baahan yahay
Marka labaad, waxaan helnaa taxane kale oo caan ah oo ciyaaro ah oo ku guuleystey malaayiin isticmaaleyaal ah konsoollo adduunka oo idil. Tani waa suurtagal inay tahay mid ka mid ah cinwaannada ugu caansan taxanaha. Hadda, waxaa lagu sii daayay taleefannada Android. Waa inaan u diyaar garownaa tartamada cajiibka ah ee ka dhanka ah kuwa naga soo horjeeda, iyo sidoo kale inaan booliiska ka tagno. Sawirada ciyaarta waa weyn yihiin, wax wax badan ka caawiya sidii loo geli lahaa sheekada ciyaartana wax badan ayey ku soo kordhisay xagga khibrada isticmaale. Waxaan leenahay mid xulashada in ka badan 40 baabuur ciyaarta, sidaas darteed waxaan dooran karnaa midka aan aad u jecel nahay. Kontaroolada si aad u wanaagsan ayaa loo qaabeeyey si ay u fududahay isticmaalka taleefanka.
Ku soo degsashada ciyaartan Android waa bilaash. In kasta oo aan ka helno wax iibsi gudaha ah.
Baahida Xawaare ™ Aad Loo Raadinayo
Grand Tuug Automobile: San Andreas
Cinwaan kale oo runtii u muuqda mid yaqaan dadka intiisa badan oo aad u badan tahay inaad leedahay oo aad ku ciyaartay xaalado badan. waan ogahay Waa taxane caan ka ah adduunka oo dhan, yaa sii daayay oo sii wadaya sii deynta cinwaanada. Tani waa suurtogalnimada tan ugu caansan uguna caansan dhammaan sheekooyinka. The Naqshadeynta ciyaarta ayaa weli ku jirta isla heerka asalka, sidaa darteed wax badan ayey naga caawiyaan sidii aan u heli lahayn khibrad wanaagsan oo ciyaarta ah waqti kasta. Waxay sidoo kale shaqo weyn ka qabteen kontoroollada, kuwaas oo si fudud loo hawlgeli karo. Waxay ku guuleysteen inay ilaaliyaan nuxurka asalka markasta, laakiin hadda waxaan ku ciyaarnaa taleefanka. Intaa waxaa sii dheer, waxaan haynaa cinwaano badan oo ka mid ah taxanaha laga heli karo Play Store, kuwa xiiseynaya.
Ku soo degsashada ciyaartan loogu talagalay Android waxay ku kacaysaa 6,99 euro. In kastoo gudaha gudaheeda aysan ka jirin wax iibsi ama xayeysiis noocuu doono ha ahaadee.
Waxaan ku xiraynaa liiska ciyaar leh guulaystay malaayiin isticmaaleyaasha kombuyuutarka ah. Waa ciyaar aan kaa tagi doonin danayn, laakiin taasi waxay ku soo bandhigtay wax ka duwan suuqa. Tani waa tan ka dhigtay mid caan ah, ilaa maanta. Laakiin hadda waxaad sidoo kale ku raaxeysan kartaa ciyaarta taleefankaaga. Ma jiraan wax isbeddel ah oo ku saabsan qaabkan. Sawir gacmeedyada waa la hayaa, gameplay-na waa isku mid. Intaa waxaa dheer, way fududahay in lagu xakameeyo taleefanka. Hadaad asalka jeceshahay, kanna waad jeclaan doontaa.
Ku soo degsashada ciyaartan loogu talagalay Android waxay ku kacaysaa 6,99 euro. Sidoo kale, waxaa jira wax iibsasho gudaha ciyaarta ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ciyaaraha ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android